Ukukhangela ubhedu obhedu, ubhedu, ubhedu wensimbi wensimbi
Ikhaya / izicelo / Ukukhangela ibhola / Ukwenziwa kweBrazil
Udidi: Ukukhangela ibhola tags: ukukhangela inkqubo yokujoyina, ukukhangela ibhonti, Inkqubo yokutsha, Inkqubo yokutsha yokufudumeza, ukukhangela ibhondi, Umshishini wokuBhaka, Umkhiqizi womshini wokukrazula, ukufudumeza ngaphakathi ukulungiselela ukutsha
Iyintoni ukukhangela ibhondi?
Ukukhangela ibhola yinkqubo-yokujoyina inkqubo esebenzisa isalathisi yentsimbi (kwaye ngokuqhelekileyo i-solvide anti-oxyidizing ebizwa ngokuthi i-flux) ukudibanisa iziqwenga zombini zensimbi ezikufutshane ngaphandle kokuqhaqha izixhobo ziseko. Esikhundleni saloo nto, kubangela ukuba ubushushu bube buncibilikisa i-filler, leyo ibhekiswa kwizinto ezisisiseko ngesenzo se-capillary.
Ukukhangela ibhola unako ukudibanisa uluhlu olubanzi lwezinyithi, nokuba lukhuni kwiindawo ezingezizo. Ukukhangela ibhondi kuchanekile kwaye kukhawuleza. Iindawo ezichazwe ngokukhawuleza zitshatiwe, ukushiya iindawo ezikufutshane kunye nezixhobo ezingakhange zichaphazeleke. Amalungu angamaqhina aqinileyo anesibindi, unobungqina bokuvuza kunye nokuxhatshazwa. Zibuye zicoceke, ngokuqhelekileyo zifuna ukuba kungabikho milling, ukugaya okanye ukugqiba. Ukukhangela ibhondi kulungele ukudibanisa kwimigca yemveliso.
Iinkqubo zokukhangela i-DaWei yokukhangela ingasetyenziselwa phantse nawuphi na umsebenzi wokukhangela. Okwangoku, iisistim zethu zisetyenziselwa kwishishini le-electrotechnical ukwenzela ukuba i-generator kunye ne-transformer izakhi ezifana nemivalo, imida, izindandatho, iingcingo kunye ne-SC-rings. Baya kubamba iipayipi zombane kunye ne-AC kunye neenxalenye zokubhukuda kwimboni yezimoto. Icandelo le-aeronautics lisetyenziselwa ukutyhutyha ama-fan blades, ama-blades for casings, kunye ne-fuel and hydraulic systems. Kwiinkqubo zendlu yezindlu zethu iinkqubo ze-braze compressor components, izinto zokufudumala kunye neebhobhe. Ziziphi izixhobo ezikhoyo? Wethu Izisombululo zokurhoxisa ngokuqhelekileyo kubandakanya i-DaWei Handheld Inucuction system yokufudumala.
Umshini wokuHubula we-DW-HF-160KW
Iibhondi zeBrazing Diamond nge-Induction